Ahoana ny fomba hanaingoanao manokana ny Fampandrenesana an'ny Apple Watch | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hanamboarana ireo fampandrenesana amin'ny Apple Watch
Iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny vaovao Apple Watch dia ny afaka manatona ny Notifications izay azonao amin'ny fomba tsotra amin'ny fijerena azy fotsiny satria ny efijery dia mandeha ho azy rehefa manangana ny sandrinao amin'izany fihetsika izay nataonao tamin'ny fiainanao rehetra izany ianao hanamarinana ny fotoana. Na izany aza, mety tsy te-handray ny fampandrenesana rehetra ianao, raha tsy ireo izay manan-danja aminao ihany, zavatra izay hanitatra ny androm-batterinao mandritra ny andro. Ka anio no ho hitantsika ny fomba fanamboarana ireo fampandrenesana amin'ny Apple Watch Ary, araka ny ho hitanao, dia dingana iray tena tsotra.
1 Ao amin'ny Apple Watch anao, ny fampandrenesana tadiavinao ihany
1.1 Karazana fampandrenesana inona no azonao raisina amin'ny Apple Watch anao?
Ao amin'ny Apple Watch anao, ny fampandrenesana tadiavinao ihany
Mbola latsaky ny herinandro sisa dia afaka mahazo izay irinao ianao Apple Watch koa andao isika hankany amin'ny mini-guide hafa izay hanampy anao handrindra azy araka izay irinao hatramin'ny andro voalohany.
Para amboary ny fampandrenesana azonao amin'ny Apple Watch Tsy maintsy manaraka dingana tsotra vitsivitsy ianao fa amin'ny iPhone, amin'ny app amin'ny famantaranandro, ary ireto manaraka ireto:
1. Sokafy ny fampiharana Apple Watch.
2. Mandehana any amin'ny "Notification".
3. Tsindrio ilay app izay fampandrenesana tianao hamboarina hiseho eo amin'ny anao Apple watch.
4. Tsindrio ny "Custom" ary ampandehano / esory ireo fiasa samihafa izay ho hitanao.
Karazana fampandrenesana inona no azonao raisina amin'ny Apple Watch anao?
Ny rindranasa rehetra misy dia samy manana "fampandrenesana tsy manam-paharoa" azonao asehoana na tsia amin'ny vaovao Apple Watch. Ohatra:
Con Mail Azonao atao ny mampihetsika na manafoana ny fampandrenesana ireo mailaka miditra ho an'ny kaonty tsirairay izay namboarinao.
En telefaonina azonao atao ny mampihetsika na mampiato ny fampandrenesana sy ny feon'ny antso.
Con Activity afaka manapa-kevitra ianao raha mahazo fampahatsiahivana, tanjona tratrarina, zava-bita ary famintinana isan-kerinandro ao aminao Apple Watch.
Con fampahatsiahivana, ny fanairana sy ny feon'ity fampiharana ity.
En Calendar, azonao atao ny mamela na tsia ny famantaranandronao mampiseho fampandrenesana momba ny fanairana ny fanasana, ny valin'ny fanasana, ny zava-nitranga vao haingana, na ny kalandrie nozaraina.
Tantano ny fampandrenesana ao amin'ny Apple Watch anao arakaraka ny filanao manokana ary amin'izany dia hialanao, amin'ny lafiny iray, ny fahazoana fampandrenesana mitohy izay "tsy mahaliana anao", farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao, ary amin'ny lafiny iray hafa dia hanaonao vonjeo ny bateria ary ny famantaranandronao paoma maharitra alina.
SOURCE | iPadize
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fomba hanamboarana ireo fampandrenesana amin'ny Apple Watch
Ny faran'ny fampisehoana tsy Retina dia manakaiky ihany